.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Android ဖုန်းမှာ Flash သီချင်းနားဆင်ရန် ( for swf file )
Android ဖုန်းမှာ Flash သီချင်းနားဆင်ရန် ( for swf file )
Flash သီချင်းတွေကို Android ဖုန်းမှာ ဖွင့်ချင်လို့လာမေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
Swf player Software လေးကိုလမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲလေးဒေါင်းပြီး မိမိဖုန်းမှာ Install လုပ်လိုက်တော့နော် အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို 1mobile.com ကနေရှာလာတာပါ သူငယ်ချင်းတို့လည်း တခြား
Android apps တွေကို အဲဆိုဒ်လေးမှာ သွားရောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်။
အပေါ်က လင့်မှာ ဒေါင်းလို့ မရရင် ဟောဒီမှာ ကျွန်တော် အသစ်ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 05:27